Naing BSell | Item - အမာရွတ်ပျောက်ဆေးအသားဖြူcreamယူလိုပါက. 0997556880409693544023ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါနိုင်ပါပြီ....Price - 12000ဆေးဝါးအတုအပ သတိပြုပါ ပစည်းစစ်ကြောင်း 100 % အာမာခံပါသည်👭အမျိုးသား & အမျိုးသမီးမရွေးလူမ်ျိုးစုံ သုံးလို့ရ ပါသည်.. အရေးကြောင်းဖြစ်နေသော လည်ပင်း
အသီးခြဲ ကိရိယာ အ​ေသး
🛍 ​khai-di ဂါ၀န္​ ​ေလး
​ေရခ်ိဳးခန္​း ​ေခ်ာ္​မလဲ ၾကမ္​းခင္​းျပား
💖 Vလည္​​ေပါက္​ ​ေရခဲသား ဂါ၀န္​​ေလး
ပစည်းစစ်ကြောင်း 100 % အာမာခံပါသည်
👭အမျိုးသား & အမျိုးသမီးမရွေးလူမ်ျိုးစုံ သုံးလို့ရ ပါသည်..
အရေးကြောင်းဖြစ်နေသော လည်ပင်း လက်က အစ အကုန်
👉ဝက်ခြံကြောင့် ကျန်ခဲ့သော အမဲစက်/အမာရွတ်
👉 နို့အကြောပျက် ခါးအကြောပြက်
💜9-complex ကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်လိမ်းပေးပါက ဂျိုက်ခွက်များအသားတက်၍ ပြန်လည် တင်းရင်းလှပသောမျက်နှာကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ ရှင်
💜ဝလွန်း၍ အကြောပြတ်ခြင်း၊ အားကစားလုပ်၍ အကြောပြတ်ခြင်း ကလေးမွေးပြီး အကြောပြတ်ခြင်း အစရှိသည့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောပြတ်ရာများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
day & night ခရင် အဖြစ်လဲ လိမ်းလို့ရပါသည်
9-complex ကိုပုံမှန်လိမ်းပေးပါက အကြောပျက်များမှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်စေပါသည်ရှင့်
🌹မျက်နှာအသားရည် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဝင်းဝင်းလေးဖြစ် ချင်သူများအတွက်
🌹အမာရွတ်ကြီးကြီး သေးသေးခွဲစိတ်ဒဏ်ရာ ကအစ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပီဖြစ်တဲ့
🌹အမာရွတ် ,ချိုင့်ခွက်များ,တင်းတိတ် အရေးအကြောင်းများ နင့် အကြောပြတ်ခြင်း ပျက်စီးနေတဲ့အသားအရည်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့9 Complexလေးပါ
တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်ရေချိုးပြီးတိုင်း လိမ်းပေးရမှာပါ သုံးစွဲပြီး ၂ပတ် အကြာတွင် သိသာသော ရလဒ်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် စွဲလိမ်းပေးရင်ဖြင့် အရှင်းပျောက်နိုင်ပါတယ်နော် all skin ဖြစ်တာကြောင့် မျက်နှာမှခြေဖျားထိ လိမ်းနိုင် ပါတယ်
ယူလိုပါက. 09 975568804
သို Bank ကနေငွေသားဝင်မာသာလျင်ပစည်းပိုဆောင်ပေးပါတယ်